ပဋိသန္ဓေတားဆေးတိုင်း ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။ - intouchmedicare
အဆင်သင့်မဖြစ်ဘဲကိုယ်၀န်ဆောင်ပါက မည်သူမဆိုမဖြစ်စေချင်ကြဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်အတွက်အမျိုးမျိုးသောကိစ္စပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်၊ထိုသို့သာမက သင့်ရဲ့မိသားစု၊လူမှုရေးများကိုလဲ အမျိုးမျိုးသောကိစ္စများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်၊အဲ့တာကြောင့် လုပ်ရမည့်အရးကြီးအရာသည် ကိုယ်၀န်မဆောင်အောင်ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်ကိုယ်၀န်တားနည်းသည်မိမိအတွက်အမျိုးမျိုးနည်းရှိပါသည်၊ဒီနေ့အတွက်တော့အမျိုးမျိုးသောယာယီကိုယ်၀န်တားနည်းကိုလာညွန်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်၊အထူးသဖြင့် လက်မောင်းအောက်ထည့်တားနည်းသည်ကိုယ်၀န်ရနိုင်ခြေအလွန်နည်းပါးပါသည်၊အသေးစိတ်များကိုသွားကြည့်ရအောင်
လက်မောင်းအရေပြားအောက်ထည့်သားဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်းသည် ကိုယ်၀န်မဆောင်အောင်လက်မောင်းတွင်းထဲ၌ပလတ်စတစ်ကိုထည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဆေးသည်မိမိ၏အရေပြားအောက်ထဲကိုတဖြည်းဖြည်းနှင့်စိမ့်၀င်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။၎င်းသည်ကိုယ်၀န်တားနည်းအရည်အသွေးအလွန်မြင့်မားသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် နောက်ပြီးအချိန်ကြာကြာနဲ့ကိုယ်၀န်တားနိုင်ပါသည်၊မိမိအတွက်အချိန်မကြာခဏကုန်ရန်မလိုတော့ပါသည်၊ဒါပေမဲ့ကျွမးကျင်သောဆရာ၀န်ထံသာလျှင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်မောင်းအရေပြားအောက်ထည့်သားဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်သောနည်းသည် ၎င်းပစ္စည်းသည်ပလတ်စတစ်ဖြစ်သောအချောင်းသေးသေးလေးဖြစ်ပါသည်၊အထဲသည်ဟော်မုန်းပရိုဂျက်တင်ရှိပါသည်။၎င်းပစ္စည်းကိုထည့်ပြီးနောက် ဆေးသည်မိမိ၏သားဉပြွန်အလုပ်လုပ်လုပ်မှုနေရာကိုသွားပြီးရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ပါသည်၊သားအိမ်ခေါင်းကိုထူစေပြီးအမျိုးသား၏သုတ်ရည်၀င်လို့မရအောင်ဖြစ်ပါသည်၊အဲ့တာကြောင့်ကိုယ်၀န်ဆောင်ခြင်းကိုမဖြစ်စေပါသည်။ဒီနည်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုမဖြစ်စေပြီး ဆေး၏ခံနိုင်ရှည်လဲ ၃-၅နှစ်အထိကြာရှည်စွာကာကွယ်စေနိုင်ပါသည်၊မေ့တတ်သောသူအတွက်ကိုလဲဆေးသောက်ရန်မလိုပါတော့ပါသည်။sidef effect နည်းပြီးမည်သည့်အချိန်မဆိုထုတ်နိုင်ပါသည်၊နို့တိုက်နေသောမိခင်အတွက်ကိုလဲမည်သည့်ကိစ္စမှမရှိဘဲနဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
2. ဆေးကဒ်သောက်ခြင်း (Birth Control Pills)
ဆေးကဒ်သောက်ခြင်းသည်ဉကျခြင်းကိုရပ်ဆိုင်း၍သားအိမ်ကိုထူစေပြီးကိုယ်၀န်ရှိနိုင်ခြင်းကိုကာကွယ်စေပါမည်။ဆေးသည်၂မျိုးခွဲထားပါသည် ၁.ရိုးရိုးဆေးကဒ် ၁ကဒ်ကိုကိုယ်၀န်မရအောင်တလစာအတွက်သောက်ခြင်း ၂.အရေးပေါ်ဆေးကဒ် ၁ကဒ်သည် ၂ လုံးသာလျှင်ရှိပါသည်။၎င်းသည်အရေးပေါ်တဲ့အချိန်မထင်မှတ်ဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းရှိတဲ့အခါ၌သောက်ရပါသည်။ဆေးကဒ်သောက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးသည် အကယ်၍ဆေးသောက်ဖို့မေ့ပါကကိုယ်၀န်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
3. တားဆေးထိုးခြင်း (Injection Contraceptives)
တားဆေးထိုးခြင်းသည် အများသောအားဖြင့်လုပ်သောနည်းတစ်ခုလဲဖြစ်ပါသည်၊ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆေးကဒ်သောက်ဖို့မေ့ရန်မလိုပါတော့သည် အဲ့တာကြောင့်မေ့တတ်တဲ့သူအတွက်နဲ့သင့်လျော်ပါသည် ကိုယ်၀န်တားနိုင်တဲ့အရည်အသွေးလဲမြင့်မားပါသည်။၎င်းသည်ဉကျခြင်းကိုလဲရပ်ဆိုင်းပါသည် နောက်ပြီးမိမိ၏သားအိမ်ကိုထူစေပြီးအမျိုးသား၏သုတ်ရည်ကိုလဲ၀င်သွားလို့မရအောင်အထိဖြစ်ပါသည်။ဒီနည်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အချိန်တိုတို၁-၃ လသာလျှင်တားစေနိုင်ပါသည်၊သို့ပေမဲ့ဆေးကိုချိန်းထားသောရက်အရစဉ်ဆက်မပြတ် မထိုးရင်လဲကိုယ်၀န်ရနိုင်ခြေရှိပါသည်။
မိန်းမကိုယ်တွင်းထဲ၌ကွင်းထည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည် ဒီနည်းသည်အများပိုင်းသုံးနေကြတဲ့အရာ၂ခုမှာ ပလတ်စတစ်ကွင်းအနီပျော့နဲ့ဟော်မုန်းဆိုပြီး၂မျိုးရှိပါသည် ၎င်းသည်ဆရာ၀န်သို့ဆရာမအားဖြင့်ထည့်ရပါမည်။ကာကွယ်နိုင်တဲ့အရည်သွေးမြင့်မားပြီး လုံခြုံမှုရှိစေပါသည် ဒါပေမဲ့ထိုပစ္စည်းပုံမှန်အထဲ၌ရှိနေသေးလားစစ်ကြည့်ဖို့ရန်အလွန်ရှုပ်ထွေးခက်ခဲပါသည်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုကွင်းသည်ကိုယ်မသိဘဲပြုတ်ကျသွားတတ်ပါသည် အဲံတာကြောင့်ကိုယ်၀န်ရှိနိုင်ခြေရှိပါသည် အမြဲတမ်းသတိထားပေးဖို့ရန်လဲလိုအပ်ပါသည်။
5. ပလတ်စတစ်ကဒ်ဖြင့်ကပ်ခြင်းအားဖြင့်တားခြင်း (Birth Control Patch)
ကဒ်ဖြင့်ကပ်ခြင်းအားဖြင့်တားခြင်းသည် ဆေးသည်ဟော်မုန်းများဖြင့်ဆေးကဒ်နှင့်ထိုးဆေးထဲ၌ပါ၀င်သောဆေးအမျိုးအစားခြင်းတူညီပါသည်၊အဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ခြင်းနည်းများခပ်ဆင်ဆင်တူပါသည်၊၎င်းကိုမိမိ၏အရေပြားပတ်ပတ်လည်၌ကပ်နိုင်ပါသည် ထိုဆေးသည်သွေးထဲကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိမ့်၀င်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်၊ဒီနည်းသည်ဆေးမသောက်ချင်တဲ့သူအတွက်နဲ့သင့်တော်ပြီး အလေးချိန်များနေတဲ့သူအတွက်နဲ့မသင့်တော်ပါသည်။
ယာယီအမျိုးမျိုးသောကိုယ်၀န်တားနည်းတစ်ခုချင်းဆီ၏ကွဲပြားခြားနားမှုသည်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါသည်၊ အကယ်၍မိမိသည်မည်သည့်နည်းနဲ့တားရမလဲဆိုတာမသိသောသူအတွက်သည် ဘယ်နည်းနဲ့ပိုသင့်တော်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဆရာ၀န်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်နိုင်ပါသည်၊မိမိ၏ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၊လွဲချော်သွားပါကအခက်အခဲများကိုကြုံတွေ့စေနိုင်ပါသည်။လက်မောင်းတွင်း၌ထည့်သောနည်းနဲ့စိတ်၀င်စားနေသူအတွက် အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းသည် ဆရာ၀န်အားဖြင့်အကြံအဉာဏ်ရယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ဌာနတိုင်းမှာဆရာ၀န်အဆင်သင့်ရှိပြီး မိမိ၏လုံခြုံရေးအတွက်ကိုလဲထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါသည်။